I-Istanbul Adalar Yakhishwa Ku-Carriers Waste | RayHaber | raillynews
IkhayaTURKEYIsifunda saseMarmara34 IstanbulI-Istanbul Adalar Yakhishwa ku-Carpent Waster
21 / 01 / 2020 34 Istanbul, JIKELELE, Highway, Izinhlelo zeThire zeTrime, HEADLINE, Isifunda saseMarmara, TURKEY, VIDEO
Iziqhingi zase-Istanbul zaqeda imfucumfucu ye-phaeton
E-Buyukada, ebilokhu ibhekene nezifo zamahhashi emasontweni asanda kwedlula, imfucuza ekhiqizwa ngama-phaeton futhi ishiywe yizimenywa ihlanjululwe ngamaqembu e-IMM. Ingqikithi yamathani edoti angu-25 aqoqiwe yathunyelwa emkhunjini yathuthelwa esikhungweni sokuhambisa udoti e-Istanbul.
UMASIPALA we-Istanbul Metropolitan (IMM) usheshisile umsebenzi wokuhlanza idolobha ngemuva kwesiphepho emasontweni edlule. Ngemuva kwamabhishi aseKilyos, i-İBB esekelwa yi-ÇSTAÇ, eyajika indlela eya e-Adalar, yaqoqa amathani odoti angama-25 esuka eBüyükada.
Izindlwana eziyi-14 emabhulokini ayi-140 aqukethe izintambo ze-İSPARK e-Buyukada zaqala ukubulawa magciwane yi-İBB Sanitary Directorate team. Izindlwana zaziphinda zibulawe amagciwane ngemuva kokuthi amaqembu asesezandleni ehlanza umanyolo. Ukuhlanzelwa okujwayelekile kanye nokubulala amagciwane ezinqolobaneni kuhlinzekwe nasezimotweni zokuwasha magciwane umuthi wokubulala amagciwane onikezwe yi-District Directorate of Agriculture.
I-İSTAÇ ihlanze imigwaqo kanye nezitebele zamahhashi e-Buyukada ngesikhathi sokuhlanza imisebenzi eqale ngeqembu lezimoto ezi-5 ezisogwini kanye neqembu labantu abangama-30 ngeviki eledlule. Imisebenzi yokuhlanza yenziwa emithambekeni yezitebele ze-İSPARK ezihlangana nolwandle. Ngokwesilinganiso sezifundo, sekuqoqwe imfucuza yamathani angama-1 nezikhwama ezicishe zibe yinkulungwane ezinhlanu. Ukulahlwa kukadoti kulayishwe emkhunjini bese kuthuthelwa esikhungweni sokudlulisa imfucuza e-Istanbul.
Imigwaqo emikhulu yaseBuyukada, izigcawu kanye nemigwaqo nayo yahlanzwa ngokushanela ngemishini nangezimishini zokuwasha imishini. Kanye nemishanguzo efakwe ethangini lamanzi, amathuluzi okuwasha nawo abulawa.
Ukuhlanza nokubulala amagciwane izitebele zamahhashi e-Heybeliada naseBurgazada kwaqala kusukela namuhla. Lo msebenzi uhanjelwa yizimoto eziyi-17 nabasebenzi abangama-80.
Amapulangwe Okuthwala Abhalisiwe Eziqhingini Adluliselwa kwi-IMM
Intsha yaseThailand yasinda ngaphansi kwesitimela
I-IMM yokuhlela i-'Iziqhingi zokuThutha zokusebenzela ”e-28 Agasti
Kuphelile Ukusebenzela Ukuqashwa Kweziqhingi
I-Boluda Tram noma iPeteton yebhayisikili Itholakala
'Isikhathi se-Alo Fayton' e-İzmir
I-Phaeton Period ivaliwe ngokusemthethweni e-İzmir
Ukuthutha namahhashi atholakele ku-Alanya
Karşıyakanamahhashi Okuthenga eTurkey
I-Electric Nostalgic Tram kanye nokuThunyelwa Kwezimoto Okuthengiswayo kusuka eDenizli kuya ezweni le-22
I-Tram yasinda ingozi e-Eskisehir
Kusinda ukufa ngemizuzwana esiteshini sesitimela (Video) | Spain
Wasinda ekuhlakaleni kwamathrekhi esitimela
UMasipala waseMetropolitan wase-Istanbul
I-Büyükada Ikhishwe ku-Carriers Waste
Izitebele zokuthwala ziye zahlanzwa e-Buyukada